Samadhan News कास्कीमा छैन ‘अनपढ’ विम्वः प्राज्ञिक उम्मेदवारले मौन अवधि बिथोल्दैनन् ! – SAMADHAN NEWS
कास्कीमा छैन ‘अनपढ’ विम्वः प्राज्ञिक उम्मेदवारले मौन अवधि बिथोल्दैनन् !
4190 पटक पढिएको
केही वर्षअघि यो विषय निकै सुनिन्थ्यो— नेता अनपढ भए । औंठाछाप सांसद बने । पर्वतमा एउटा कार्यक्रम नै भयो, नेताको योग्यता तोक्नुपर्ने बारे । २०७२ सालमा संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै पर्वतका ओमप्रकाश बस्यालको माग नै थियो, ‘सरकारी कार्यालयमा जागिर खान कार्यालय सहायकको पनि शैक्षिक योग्यता चाहिने अनि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न शैक्षिक योग्यता नचाहिने ?’
गएको साल पुस १७ गते संघीय संसदमा नेकपा सांसद गजेन्द्र महतले मिडियामा अनपढ भनेर उडाइएको भनेर आवाज नै उठाए । ‘माननीय मन्त्रीलाई अनपढ गवाँरको बिल्ला भिराइन्छ,’ महतले संसदबाट आपत्ति जनाएका थिए ।
नेता, सांसद, मन्त्री अध्ययन र शैक्षिक योग्यता नै नभएका भए भन्ने विम्व अब भने हराउँदै जान थालेको छ । नपढेका नेता र सांसद भए भन्ने बिम्व कास्की क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका उम्मेदवारलाई हेर्ने हो भने पनि फेल खान्छ ।
नपढ्दैमा सबै खत्तम नै हुने केही पनि होइन, उनीहरुसँग पनि अनुभव र काम गर्ने फरक क्षमता हुनसक्छ । तर, कास्कीको २ को उम्मेदवार हेर्दा यो भविष्यका लागि सुन्दर पक्ष भएको समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र बताउँछन् । डिग्री नगर्दैमा, एलएलसी पास नहुँदैमा केही नबिग्रने भए पनि अध्ययनबाट प्राप्त सर्टिफिकेटको आधारमा विवेक र ज्ञानको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सर्टिफिकेट हुनु र अनुभव तथा विवेकी हुन् । फरक कुरा हुन् । नपढेको व्यक्ति खतमै हुन् भन्ने होइन । तर, अपढेका नेता, सांसद भनेर आक्षेप लाग्ने गरेको सुनिन्थ्यो,’ समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, ‘सर्टिफिकेट नभएका व्यक्तिले पनि समाज बुझेका, स्वअध्ययन गरेका र काम गर्ने क्षमता भएका पनि हुन्छन् । औपचारिक अध्ययनलाई आधार मानेर सोच, चिन्तन र विचारलाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’ पढेपछि राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ चिरिएको उनको तर्क थियो ।
ठूला भनिएका दल र घरदैलो गरिएका अरु पनि यहाँ पढेलेखेकै र अध्ययनशील उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएका दुबै जना लामो समय प्राज्ञिक क्षेत्रमा समय गुजारेका उम्मेदवार छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उम्मेदवार विद्या भट्टराई प्राध्यापन क्षेत्रबाट फेरि राजनीतिमा पुनरागन गरेकी हुन् भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेल शिक्षकबाट अवकास प्राप्त व्यक्ति हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्दा गर्दै रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि हुने उपनिर्वाचनमा टिकट पाएर चुनावमा होमिएकी विद्या त्यही विषयमा एमफिल गर्दैछिन् । अध्ययनशील र रिसर्चको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी व्यक्तिका रुपमा विद्यालाई हेरिएको छ ।
कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज बौद्धिक र अध्ययनशील नेता मानिन्छन् । उनले संस्कृत साहित्यमा डिग्री गरेका छन् । उनी अध्ययन, छलफल र चिन्तन गर्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार धर्मराज गुरुङ इन्जिनियर हुन् । इलोक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर धर्मराजले बेलायती सेना र संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरेका छन् । आइटीको क्षेत्रमा लामो अनुभवसमेत प्राप्त गरेका धर्मराजले १ सय ८० भन्दा बढी देशका प्राविधिकसँग काम गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
अर्को समाजवादी पार्टी र विवेकशील नेपाली दलका उम्मेदवार पनि बौद्धिक र पढेलेखेका उम्मेदवार हुन् । साझा पार्टीकी उम्मेदवार रजनी केसी पपुलेसन, जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । पोखरा विश्वविद्यालयमा उपप्रशासनबाट राजनीतिमा छिरेकी रजनी तार्किक र अध्ययनशील छन् ।
विवेकशीलकी उम्मेदवार जमुना शर्माले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । जमुनाले कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी हुन् । सामाजिक मनोपरामर्श दाताको रुपमा काम गरेकी छन् । विभिन्न संघ, संस्थाको नेतृत्व गरेकी जमुना समाज अध्ययनसँगै पुस्तकमा पनि रुचि राख्छिन् ।
राष्ट्रिय प्रजान्तत्र पार्टीका उम्मेदवार भण्डारी पनि शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । उनी आइए पास गरेर लामो समय शिक्षण पेसा थिए । विभिन्न संघ, संस्था र समाजलाई नजिकबाट हेरेका भण्डारी बौद्धिक नेतामै गनिन्छन् ।
कास्कीमा ११ दलका र १० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । त्यसमा पनि अधिकांश औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नै छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार कमलजंग कुँवरले त झन् किताबसमेत लेखेका छन् र उनी संरक्षणको क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् ।
उम्मेदवारको घरदैलो र चुनावी प्रचार हेर्दा पनि शालीन नै देखियो । बुधबार राति १२ बजेबाट प्रचार रोकिएको छ । प्रतिशतका हिसाबले पनि शिक्षित व्यक्तिहरु बसोबास गर्ने जिल्ला भनेर चिनिएको कास्कीमा मौन अवधिमा शिक्षितकै परिचयका प्रस्तुत हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र सुवेदी बताउँछन् ।
‘निर्वाचन गराउन हामी तम्तयार छौं । दल तथा उम्मेदवारहरुले घरदैलो र प्रचार सकेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘शिक्षित जिल्लाका उम्मेदवार र पार्टीले व्यक्ति पनि शिक्षित नै रहेछन् भन्ने परिचय दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ अरु चुनावमा मौन अवधिलाई ‘मनि’ अजधि पनि भन्ने गरिएको छ । कास्कीमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै दल र उम्मेदवार सचेत रहेको उनको विश्वास छ ।